Biden oo la hadlay taageerayaasha Trump – “Waxaan doonayaa in aan madaxweyne idiin wada noqdo” – Calanka.com
Biden oo la hadlay taageerayaasha Trump – “Waxaan doonayaa in aan madaxweyne idiin wada noqdo”
Joe Biden ayaa sheegay in la joogo “waqtigii la bogsiin lahaa” America, khudbaddiisii ugu horraysay ee madaxwaynaha la doortay, wuxuu ballanqaaday “inuusan kala qaybin dalka laakiin uu midayn” doono.
“Midba ka kale fursad aynu siino,” ayuu yidhi Mr Biden, isaga oo la hadlaya dadkii ka codeeyay ee ka soo horjeeday.
Mr Biden ayaa ka adkaaday madaxweynaha xilka haya ee Donald Trump ka dib markii la tiriyey codadkii la dhiibtay doorashadii Talaadadii.
Mr Trump weli qirasho ma uusan samaynin, kamana uu hadal meel fagaare ah tan iyo markii guuldarradiisa lagu dhawaaqay intii uu ciyaarayay golfka.
Natiijada ayaa ka dhigaysa Mr Trump inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee hal mar ah tan iyo 1990-yadii. Kooxdiisa alolaha ayaa geeyay dacwado aad u tiro badan gobolada kala duwan laakiin saraakiisha doorashada ayaa sheegaya in aysan jirin cadeyn muujineysa in codadka lagu shubtay.
Dabaaldegyo lama filaan ah ayaa ka dhacaty magaalooyinka waaweyn ka dib markii warbaahinta ay shaacisay guushii Mr Biden Sabtidii. Taageerayaasha Trump oo ka cadheysan natiijada ayaa lagu isugu soo baxay magaalooyinka qaar laakiin ma jirin wax warbixino ah oo ku saabsan falal dhacay.
Biden: ‘Waa inaan joojinnaa inaan kuwa inaga aragti duwan ula dhaqanno cadaw ahaan’
Isaga oo la hadlaya taageerayaashiisa oo ku faraxsan kuna goob baabuurta la dhigto ee ku taal magaalada uu ku dhashay ee Wilmington, Delaware, Mr Biden wuxuu yidhi: “Waxaan ballan qaadayaa in aan noqon madaxweyne doonaya in la kala qaybsamo, laakiin aan mideeyo; Mareykanka. “
Mr Biden – oo ilaa iyo hada ku guuleystey in ka badan 74 milyan oo cod, oo ah tii ugu badneyd ee abid loo qaado murashax madaxweyne ee Mareykanka – wuxuu bogaadiyey taageerayaasha “kaladuwan” ee uu soo uruuriyey intii uu ololaha socday, laakiin wuxuu sidoo kale si toos ah ula xirdhiidhay taageerayaasha Trump.
“Waxaa la joogaa waqtigii la iska dhaafi lahaa hadalada xanafta leh, heerkulka hoos loo dhigi lahaa, dib la isu arki lahaa, markale la is dhageysan lahaa,” ayuu yidhi Mr Biden. “Iyo si aan horumar u gaarno, waa inaan joojino inaan kuwa naga soo horjeeda ula dhaqanno sidii cadaw.”
Madaxweynaha la doortey, oo masraxa isaga oo xidhan qalabka wejiga lagu xido eemaaskaraha, ayaa ku dhawaaqay inuu dhisi doono gudigiisa jawaab celinta coronavirus si loo hubiyo in uu diyaar u yahay inay fuliyo go’aannadaas laga soo bilaabo maalintii caleema saarkiisa ee Janaayo.
Jawaabtii maamulka Trump ee aafada waxay ahayd badhtamaha ololahiisa madaxweynenimada, waxaana dhaleecayn culus jeedinayey Mr Biden. In ka badan 237,000 oo Mareykan ah ayaa dhimatay, waana in ka badan waddamada kale ee adduunka.
Mr Biden wuxuu noqonayaa 78 jir markuu xilka qabto, isagoo ka dhigan madaxweynihii ugu da’da weynaa ee markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka soo mara.
Harris: ‘waxaad doorateen midnimo iyo rejo’
Mr Biden waxaa masraxa kusoo dhaweysay kuxigeenkiisa Kamala Harris, taas oo dhigtay taariikhda ah haweeneydii ugu horreysay, ee madow ah uguna horeysay Aasiyaanka-Mareykanka ah ee madaxweyne ku xigeen loo doorto.
“Markii dimuqraadiyaddeennu ay ku jirtay codbixinta doorashadan, Ruuxdii Mareykanka ayaa halis ku jirtay adduunka oo dhamina isha ayay ku hayeen, waxaad maalin cusub u horseeday Ameerika,” ayay tiri.
“Waxaad doorateen rejo iyo midnimo, qaddarin, cilmi iyo haa, runti – waxaad u dooratay Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Wadada soo socotana ma sahlanaan doonto laakiin Mareykanku waa diyaar, sidaas oo kale aniga iyo Joena waxaan nahay diyaar”
Waxa ay sidoo kale xustay daqiiqad taariikhi ah oo natiijada doorashadu calaamadeysay: “In kasta oo aan noqon karo haweeneydii ugu horreysay ee xafiiskan ah, ma noqon doono kan ugu dambeeya.”
Booliska Kenya oo soo bandhigay mid ka mid ah burcaddii afduubatay Xafsa Maxamed Luqmaan
June 20, 2021 — 0 comments
Booliiska Kenya ayaa soo xiray mid ka mid ah raggii ka dambeeyay “afduubka” gabdhaha Soomaalida dhowaan loogu geystay magaalada Nairobi… Read More ›
VIDEO: Booliska New York oo soo bandhigay dhacdo toogasho ah oo xanuun badan
Dowladda Filibiin oo mar kale fagaare ku budaagtay gawaari qaali ah
21 gaari oo noocyada qaaliga ah ayaa waxaa ay dowladda dalka Filibiin ku burburisay goob fagaare ah kadib markii ay… Read More ›
Waa kuma hoggaamiyaha cusub ee dalka Iran Ebrahim Raisi?
Wadaadkan 61 sano jirka ah oo lagu tiriyo inuu mayal adag yahay wuxuu ku dhashay magaalada Mashhad ee Iiraan ka… Read More ›
NAIROBI: Gabadhii la afduubtay ee Hafsa Maxamed Luqmaan oo nolol lagu helay
Ciidanka Booliska dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay helaan Gabar lagu magacaabo Xafsa Maxamed Luqmaan oo maalmo kahor ay waayeen… Read More ›
© 2021 Calanka.com. All rights reserved.
CONTACT: webmaster@calanka.com - About Us